Xisbiga uu hogaamiyo Sheekh Shariif oo dacwad ka dhan ah XF u gudbiyey maxkamadda sare. – Kismaayo24 News Agency
Xisbiga uu hogaamiyo Sheekh Shariif oo dacwad ka dhan ah XF u gudbiyey maxkamadda sare.
by admin 6th October 2019 031
Xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa Maxkamadda Sare ee Dalka u gudbiyay Dacwad ka dhan ah Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Xisbiga Himilo Qaran ayaa waxaa uu sheegay inay dacwad ka dhan ah Xukuumadda u gudbiyeen Maxkamadda sare ee dalka,taasi oo ku saabsan xayiraadii dhawaan dowladda saartay diyaarad uu Sheekh Shariif iyo wafdi la socday u raaci lahaayeen Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xubnaha Xisbiga Xisbiga Himilo Qaran oo Shir Jaraa’id warbaahinta ugu qabtay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Xisbiga uu Go’aansaday in sharciga uu la tiigsado Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo bixisay amarkii lagu celiyay Shariif Sh Axmed.
Sidoo kale falkii lagu xayiray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayuu Senator Ilyaas Cali Xasan ku tilmaamay inuu ahaa mid lagu tumanayo Sharciga dalka u yaalla.
Dhawaan ayay aheyd markii Sheekh Shariif Sh Axmed iyo wafdi la socday dowladda Federalka Soomaalia saartay xayiraad xili uu deoonayay inuu u duulo Magaalada Kismaayo,isaga oo halkaas uga qeyb geli lahaa Caleemo-saarka Axmed madoobe.
Puntland oo soo Bandhigtay Ciidamo Xoogan,,,,
Dhageyso: Dableeydii markabka afduubka u heysatay oo xalay ku dhaqaaqay wax lama filaan ah oo ilaa iyo hada aan la ogeyn sababta ka…..
Tifaftiraha K24 17th March 2017
War Hada: Qunsuliyada Safaarada Soomaliyeed ee Magaalada Cadan oo Shaacisay in ay Bilowday Daad gureynta Qaxootiga Soomaliyeed ee ku Go’doonsan Wadanka Yaman